Nhare Yekufambisa uye Kukanganisa Kwayo paMitambo | Martech Zone
Smartphone muridzi haisi chete iri kuwedzera, kune vanhu vazhinji ndiyo nzira yavo yese yekubatanidza neInternet. Kubatana ikoko mukana wee-commerce masaiti uye zvitoro zvekutengesa, asi chete kana ruzivo rwemushanyi wako rwuri pamusoro pevanokwikwidza.
Kupoterera pasirese, vanhu vazhinji uye vazhinji vari kuita kusvetukira kune yavo yevaridzi. Dzidza kuti kufamba uku kune nhare kuri kukanganisa sei ramangwana re-e-commerce uye indasitiri yekutengesa izere. DirectBuy, Kufambira Toward Mobile
Maitiro Ezvakaitika Zvinokanganisa Commerce
pasina mobile optimization, vashandisi vane mukana wakapetwa kashanu wekusiya yako saiti
79% yeavo siya yako saiti vachatsvaga saiti iri nani kupedzisa kutenga kwavo.
48% yevashandisi vanotsamwiswa pane saiti isiri nhare yakagadziridzwa uye 52% vari kashoma kuita bhizinesi nekambani yako.
Tags: 2015YeMahara neThebhu Kushambadziranharembozha ecommerce maitironharembozhamobile optimizationnhare inopinduranharembozhawirirana
Sep 2, 2015 na11: 57 PM
Izvi zvakakosha kufunga nezvazvo. Maitiro mazuva ano anorairwa nevatengi kwete imwe nzira yakatenderedza. Nekudaro, vatengesi vanofanirwa zvakare kutarisa mukutsvaga izvo zvinoitika uye kutora mukana pamusoro pazvo.
Sep 9, 2015 na7: 32 PM
Kuva nenzvimbo-yakagadzirira saiti kunongove kuve kwakanyanya uye kwakanyanya kukosha, kwete chete nekuti kuchinja kubva kudesktop kuenda kubhurawuza nhare kucharamba kuchienderera, asi nekuti makwikwi ako acharamba achishanda kuti awedzere kuwedzerwa nhare. Kujekesa, kukwidziridzwa kunoreva zvakawanda kupfuura kungova nenzvimbo inoteerera - asi usandibata zvisirizvo, kuve neinoteerera saiti zvirokwazvo kutanga kukuru! Iwe unogona kushamisika kuti vangani vachiri vasina kana izvozvo!